Jaal Finiinsaa atillee ga’ee kee goolabdee wareegamte akkuma Baaroo Tumsaa, Taddee Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu… – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosJaal Finiinsaa atillee ga’ee kee goolabdee wareegamte akkuma Baaroo Tumsaa, Taddee Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu…
Jaal Finiinsaa atillee ga’ee kee goolabdee wareegamte akkuma Baaroo Tumsaa, Taddee Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu…
#Jaal Finiinsaa atillee ga’ee kee goolabdee wareegamte akkuma Baaroo Tumsaa, Taddee Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu……… fi jalleewwan kumaan lakka’amani wajjin xumurteetta. Qawwee kees hin hiikkanne. Nuyis kaayyoo keessan galmaan geenya hanga dacheerraa dhumnutti.
Jaallatamtoota jaallewwan koo ani kan dura mootummaa araara daa’effatee WBO fiixuuf akka ka’e isiniiif barreesseera.
Ammas yaada gababaan isinif hira kaayyoon mootummaa kanaa
1) Oromoof oromiyaa diigee Itoophiyaa haaraa ijaaruu.
2) Alabaaf dhaaba ABO #WBO kan jedhu jijjiruu.
3) Miseensaaf deggertoota isaa hidhu, reebuu, ajjeessu.
4) Araaraan sossobee meeshaa waraanaa hikkachisee salphisu.
5) Liyyuu Hayyilii, kora bittinneessaa, poolicii, Agazii, Makkalaakayaa, koomandoo Itoophiyaa duwwaa Regan hundeessu.
6) Magaalaa Finfinnee keessatti master pilanii Itoophiyaa haaraa ijaaruuf jedhu karaa ddhoksaan waggaa sadii gidduutti jalqabanii xumuruu
7) Dhaaboota siyaasaa biyyatti keessa jiran tumsa akka godhaniif maallaqa guddaa gad lakkisaaniif lafa inveestmeentii kennaniifi diina oromoo taasisuu
=>Oromoon Aadaa, biyya, afaan, seenaa, amantii isaa nama mararu gad dhiisee kana hin godhu.
Kun tokko lamaan gara hojiitti hiikama karoora jarraati.
WBOn garuu sabaa isaaf biyya isaa gad hin dhiisu ilbuu goototaati. Lafeetu waraana. Ekeraa isaanitti doorsisa. Kanumaa!
Hiriira mormii annaa miyyoo Hiddii Lolaa Gudinaa Boorana keessatti dhowee jira. Kutaalee Oromiyaa mara akka dhaqqabuu qabu uummata Oromoo hubachiina!
Dhaadannoo uummata Oromoo Booranaa Hiddii Lolaatti Awwaalcha Misirroowwaan booda taasisan
●Finfinneen handhuura keenya
●WBO waraan keenya
●WBO’n Gaachan keenya
●WBO’n abbaa biyyaati
●Raayyaan ittisa biyyaa hattu
●Raayyaan ittisa biyyaa saamtu”
Haraarii kuni deegartu OPDO dhan hin-taha’u .
ABOn offeeganno cimma godhacuu qaba .
Ammas ABO/WBOn soban araa’mu hin-qabu. OPDOn Oromo mitti. Kana irrati waali galuu qabna.
Abba Gada Sanbattoo #Hajii_Jawar_Mohammed, Bekele Gerbe hundi Araraa’a ABO kesaa bahu qabu. Abba Gada Sanbattoo Araraa’a kana kesaa galuu hanqabu. An-Arara kana kesaa galuu qabu Abba Gada Borana Gujii,Harargee,Shawa ,Walaga etc.. dha.
OPDOn Araraa’a kana kesaa galuu hin-qabduu.tokkolee. Tahus hinqabu degartuu sani hunda wajiin. ABOn gara kampii galaan dubiin bara 1992 dhufee akka jirtuu dha dubiin . Yeroo Amma kana OPDO ammanun walalumma dha. kana beeka ya saba’ko .
Osoo OPDOn sabaf yadee maalif xiiyyaran uumata keenya fixiu laata ? kana beeka kuno. OPDOn sirna wayanee debiftee saba keenya fixaa jirti. Menilk nurati bobokisisaa jirti kana hundi keenya beekna.
Qeerroo Oromiyaa hundi qophayee FXG fixaa basu qaba kana. Tahu banan Oromo bilisaa bahun akka abjjuu dha. Artistoni keenya an akka #HacaaluuHundessaa Oromon billsaa bahee jedhee odessee sun togogorra gudha dha. OPDOn kara tokkon Arara’a jetee kara tokkon’mo kuno uummata keenya irrati warana wayanee dhan bantee ijoolee chorqa Walaga irrat fixaa jirti kuni malee agarsisaac? Walala ho_tanee malee yeroo amma kana mummichi Col/Abiy Ahamed Oromo Abashati gurguraa akka jiruu dha .
OPDOn yeroo Amma kana Oromiyaa baleesitee biyyaa Itoopiyaa ijaruudhaf kutatee katee jirtii. Kanafuu dhamsii ani dhamsaa jiruu Oromon Qeerroo fi qareen akka off hin-dhaganee.amma caalqabnee falamacuu qaba dhiiroo. OPDOn Artist keenyna an arkka hin-keeyninee #Dhaadii-Galaan kuno galafatee jirtii Artistota keenyna hunda sodacisuu dhaf.
Kana beeka ya Oromo .
Qabsoon Amma fixan bahuti itifufaa.
Qabsoon cimmee Oromiyaa gututi itii hafufu kana boda Amma OPDOn baduti.
Kanumma dhugan jirruu.
Artist Daadhii Galaan haalli inni itti ajjeefame hedduu nama gaddisiisa.
Weellisaan kuni roorroo hedduu saba isaa irra gahaa turee fi ammas itti jiruuf guyyaa tokko osoo hin jilbiiffanne quuqqaa saba isaa sodaa tokko malee dubbachaa, barreessaa, hidhamaa reebamaa haga lubbuun jirutti guyyaa tokko yaa jiruu koo osoo hin jedhin saba isaaf aarsaa guddaa nama of taasiseedha. Daadhiin dhimma oromummaa irratti namuufuu fuula kennuu baatus namusaa fi hariiroo gaarii namoota faana qabuun uummata biratti hedduu jaalatama.
Haalli ajjeefamuu isaa Diinanis haa ta’uu fira alagoomenis haa ta’uu waan tasa ta’e osoo hin taane itti yaadameeti. Daadhiin iddoo dhaloota isaatti sagantaa eebba hoteelaa irratti weellisaa oolee kutaa teessumaaf isaaf qophaa’e keessatti alaa gara manaatti namni dhukaasee nama ajjeesu sanuu nama onnee irra rasaasa takka qofaan dhahee ajjeesuu danda’uun tasa dhahame jedhanii haasa’uun har’as akkuma kaleessaa dhoksaatti ajjeesanii nama faana barbaadudhaan adda miti. Sagantaa Eebba Hoteelaa sanaa irratti garuu wanti nama gaddisiisu namoonni sagantaa sana irra oolan gammachuudhaf guyyaa guutuu rasaasa dhukaasaa oolun isaanii yeroo diinni Daadhiitti dhukaasu akka waan haaraan hin uumamneetti ilaalamee isa Goota keenya galaafate yeroofis ta’u miliquu akka danda’u taasiseera.
Hamma feene yoo gaabbine Daadhii deebisuu baannus iddoo sagantaa akkanaatti gara samiitti dhukaasun maalif barbaachise? Sanuu bakka dhugaatin jirutti bakka dhugaatin jirutti hir’inni ilaalchaa guddaatu jira. Oromoon rasaasa ittiinis ajjeesaa ittiinis dhumaa ture. Gammachuun samiitti ol dhukaasuun argamu maali? Dachii tanaa olii diina maal qabna? maraafuu duuti Daadhii Galaan 100% itti yaadameeti.yaa Oromoo diinni kee ni dhokate malee hin badne. Ni riphe malee hin duune. Eessattuu of eeggannoo barbaachisaadha.
Qaamni kana qorachaa jiru dhimma kana qulqulleessee yeroo gabaabatti uummataaf beeksisuu qaba. Uummanni naannoo sanaas odeeffannoo kamiiyyuu yoo argate hatattamaan qaama seeraaf beeksisuu qaba.
Yoo kan ukkaamsuu yaadan ta’es miidiyaaleef qoodaa. Gaafas ifaan walitti baana. Daadhii koo Seenaa gaabbii hin qabne hojjettee iddoo waliif gaabbun hin jirre dhaqxe. Kan har’a siif dhufe iddoo amanuun ulfaatu garuu amanuun dirqamaati. yoomuu sin dagannu. dhiigni kees dhangala’ee hin hafu. Maatii fi firoottan isaaf akkasuma uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Nagaan boqodhu Koodeekoo RIP!
Jilli koree teeknikaa tokko D/T Gumii Abbootii Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi Baqqalaa Garbaan durfamee gara Lixaa qajeelee jira. Kan lammataa Ob Haylee Gabree, Sheek Hajjii Ibraahim fi ana dabalatee gara Kibbaa fuulleffanne.
– Boru Godinootatti gabaasnee aanaalee ramadamnetti tamsaana
– Gaafa Sanbataa hanga Wiixataa aanaalee irratti koree dhaabnee orientation barbaachisaa kennina.
– Kibxataa hamma Kamisaa WBO simannee loltootasf meeshaa isaanii galmeessinee ofitti fuuna.
– Jimaata WBO fudhannee dachaana.
Kun karoora keenna. Gargaarsa isin hundaafi kan rabbiin galmaan geenna.
Waan Barbaannu guuttanne
– MNO Xalayaa barreessee qaamonni mootummaa hundi nu waliin akka hojjatan ajajeera
– Hoggansi RIB xalayaa barreessuun guyyoota 10f lolli akka dhaabatu guyyota sadeen WBOn galuuf karaan akka banamu ajajeera. Jila waliinis akka hojjatuufis himeefiira
– Hayyudureen ABO waraanni jila simatanii hidhannoo Abbootii Gadaatti laatanii qajeelfama isaaniitin mooraa akka galan ajajaniiru.
Amaanaa sabaa fudhannee
Guyyota diigdamaaf qophoofne
Waan barbaachisaa xumuranne
Nagaa sabaa buusuuf baane
OMN: የኦሮሞና የሲዳማ የትግል አጋርነት ( February 12 2019 )
SMN Facebook Live Feb. 11,2019.
OMN: Oduu Galgalaa (Guraandhala 14, 2019)
Ethiopia: ፊት ለፊት ከጎንደር ሕብረት ሊቀመንበር ጋር – “ጎንደር የራሱን ክልል መመስረት አለበት” | Hiber Radio | Dr Mulugeta
Kuni Meeshaa Waraanaa naannoo amhaaraa mana dhuunfaa nama tokkoo tti argameedha.